पालुङटारमा शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुका लागी आधारभूत तालिम सञ्चालन – Gorkha Sansar
गोर्खा संसार २०७६, ४ असार बुधबार ०६:५२
पालुङ्टार नगरपालिकामा मा नेपाल शिक्षक महासंघ नगर समितिले आधारभूत तहका शिक्षकहरुका लागी ७ दिने आधारभूत आइ सि.टी. तालिम सञ्चालन गरेको छ ।
नगरपालिकाको सहयोग र शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा पालुङटार को समन्वयमा नगरपालिका भरिका आधारभूत तहका शिक्षकहरुका लागी तालिम प्रदान गरेको हो । आधारभूत तहका शिक्षकहरुका लागी आइ सि टि मार्फत शिक्षण गर्न सक्ने बनाउनको लागी पहलस्वरुप तालिमको आयोजना गरेको महासंघ पालुङटारका अध्यक्ष चेतनाथ पन्तले बताउनुभयो ।
४० जना शिक्षकहरुका लागी २ स्थानमा तालिम सञ्चालन गरिएको छ । जसमध्ये भवानी मा.वि.मा २२ जना र त्रिवेणी मा.वि.मा १८ जना शिक्षकहरु सहभागी रहेका छन् । जसमध्ये भवानी मा.वि.मा सुरेन्द्र देवकोटा, प्रकाश पोखरेल, विष्णु गिरि, वि.नि. माधव पोखरेल, अशोक श्रेष्ठ लगायतका प्रशिक्षकहरुले प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेका छन । त्यस्तै गरी त्रिवेणी मा.वि.मा सञ्चालित तालिममा भुवन अधिकारी, मिलन राना, समीर अधिकारी, रविन्द्र कंडेल, नविन पन्त लगायतकाले प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेका छन् ।
असार १ गतेदेखि सञ्चालन भएको सोे तालिमको समापन असार ७ गते शनिबारका दिन हुुनेछ ।
त्यस्तै गरी आगामी असार ८ गतेदेखि शिक्षक महासँघले नि.मा.वि. तहका बिज्ञान शिक्षकहरुका लागी ३ दिने कार्यशाला गोष्टीको आयोजना गरेको महासंघका अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त कार्यशाला मिरकोट मा.वि. मिरकोटमा सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तै गरी ११ गतेदेखि माध्यमिक तहका बिज्ञान शिक्षकहरुका लागी अमर ज्योति मा.वि.मा कार्यशाला सञ्चालन गरिने समेत बताइएको छ ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्थायी कोभिड विशेष अस्पतालमा मृत्यु भएका वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२०७७, २३ श्रावण शुक्रबार २०:०६